Christie's Magnificent Jewels ဂျီနီဗာ၊ လေလံအိမ်၏နှစ် ၂၅၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အတွက်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးလေလံတင်ပွဲနှင့်အတူ "ခမ်းနား" လေလံပွဲ
နိုဝင်ဘာလ 11, 2016
လာမည့် ခမ်းနားရတနာ လာမည့်နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင်ဂျနီဗာရှိ Christie's တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောအရောင်းသည်အရောင်အသွေးစုံသည့်ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောရတနာများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အရေးပါသောရတနာများကိုရောင်းချပေးလိမ့်မည်။ Premier။ လေလံဌာန၏ ၂၅၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels, David Webb, Harry Winston …။ နာမည်အကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည်လာမည့်အံ့ဖွယ်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးတွင်သူတို့၏သန့်စင်ပြီးအလွန်အရေးကြီးသောဖန်တီးမှုကြောင့်အရောင်းခန်းကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြသမည်ဖြစ်သည်။
ဒီလေလံပွဲကလေလံပွဲမှာပိုပြီးထူးခြားပါတယ် ကမ္ဘာ Premierအသစ်စက်စက်ရတနာ Maison အသစ် Boehmer နှင့် Bassenge တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအမြင့် Jewelery ဖန်တီးမှုစတင်ရန်ဤအထူးဖြစ်ရပ်ရွေးချယ်ခဲ့သည် Le Jardin d'Isabelle ဆှဲကွိုး နှင့် Miroir က de l'Amour ပုတီး.
Boehmer et Bassenge Le Jardin d'Isabelle လည်ဆွဲ
Boehmer နှင့် Bassenge Miroir de l'Amour စိန်နားကပ်များ
သဘာဝကမ်းလှမ်းနိုင်သောထိပ်တန်းစိန်များပါ ၀ င်သည့်အံ့မခန်းဖွယ်အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုနှစ်ရပ် (လေလံတင်ရောင်းချခဲ့သည့်အကြီးမားဆုံးသစ်တော်သီးပုံသဏ္boာန်ရှိသည့်နားကပ်များ) အားလုံးသည်အရံမပါဘဲအလွန်ထူးခြားစွာရောင်းချနိုင်လိမ့်မည် (ဤအံ့ဖွယ်များကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်) ငါ့အရင် တိုင်).
အနက် ရောင်စုံစိန်သတိမပြုမိဘဲမနေပါက၎င်းသည်ရှားပါးသည် ဖန်စီ Vivid ပန်းရောင်သစ်တော်သီးပုံသဏ္diamondာန်စိန်အလေးချိန် ၉,၁၄ ကာရက်ရှိပြီးအလေးချိန်ရှိသောပလက်တီနမ်ဖြတ်ထားသောစိန်ပခုံးများနှင့်ပလက်တီနမ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤစိန်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်မြင့်မားသောတန်ဖိုးသည်အလယ်အလတ်အရောင်မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးရှားပါးသည်။
ခမ်းနားထည်ဝါသောရတနာများသည်ဤအံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်အစုံလိုက်များကိုမပူဇော်နိုင်ပါ Diamond Necklace သည် Harry Winston ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်၎င်းတွင် ၃.၀၅ မှ ၁၉,၁၁ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောသစ်တော်သီးပုံ ၁၂၈,၂၄ ကာရက်ရှိစိန်ပွင့်များရှိသည်။ စိန်အားလုံးသည် GIA မှသတ်မှတ်ထားသော D / အပြစ်အနာအဆာကင်းနိုင်သည်။
ဒီအံ့ to စရာတစ်ခုထပ်ထည့်ရန် Cartier စိန် Parureနှင့် စိန်လက်စွပ်အမြဲ Cartier ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
CARTIER BY, DJAM ကျောက်မျက်ရတနာအစု
ပါဝင်သည်: ဖြည့်စွက်ထားသောသစ်တော်သီးပုံသဏ္pendာန်စိန်ဆွဲအားဆိုင်းငံ့ထားသည်၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၀.၀၀ ကာရက်၊ ၄၁.၀ စင်တီမီတာရှိမြို့ပတ်ရထား၊ Marquise နှင့်သစ်တော်သီးပုံသဏ္Vာန်စိန် V-образလည်ဆွဲ၊ ၅.၀၂ စင်တီမီတာနှင့် ၅.၀၁ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောပုတီးတစ်ချောင်းစီသည်ရွှေရောင်တပ်ဆင်ထားသောဖြာထွက်စိန်ပုံဆွဲကြိုးကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်း၊ အမှုန်တစ်ခုစီအမှုန်အမွှားအစုအဝေးတစ်ခုကျော်လွန်သွားသည်။
CARTIER BY တစ် ဦး ကစိန်လက်စွပ်
အလေးချိန်အားဖြင့် ၁၄.၁၈ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသောစိန်ပွင့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးရွှေကြိုးတပ်ထားသောအရွယ်အစား ၆ လက်စွပ်အရွယ်ရှိစိန်ပခုံးများအကြားအရွယ်အစား ၆ လက်မခန့်ရှိသည်။
လာမယ့်သီတင်းပတ်မှာဂျီနီဗာမှာကျင်းပမယ့်လှပတဲ့ပုလဲရတနာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ငါ့ရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ထားတာပါ Putilov ပုလဲ.
ပူတီနိုဗစ်ပုလဲအလယ်ပိုင်း ၁၉ ရာစုမှ လွဲ၍ သဘာဝပုလဲနှင့်ဒိုင်မွန်ချပ်ခလုတ်ပုံသဏ္naturalာန်ပုလဲကို ဗဟိုပြု၍ ၁၈၆၇ မှ ၁၉.၀၅ မီလီမီတာ× ၁၆.၁၅ မီလီမီတာရှိသည့်အပွင့်ပွင့်ပြားသောစိန်ထားဘောင်အတွင်း၊ ၅.၀ စင်တီမီတာ၊ ငွေနှင့်ရွှေဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
Nikolai Putilov သည်ရေတပ်ဝန်ကြီးဌာနမှအငြိမ်းစားအရာရှိတ ဦး အား ၁၈၆၈ တွင် Kirov စက်ရုံ (စိန့်ပီတာစဘတ်ရှိအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံ) ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး၎င်းကို Putilov ကုမ္ပဏီဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၈၈၀ တွင်ရုရှား၏သံမဏိသံမဏိအမြောက်အများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးစက်ရုံသည်သူ၏သေခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ သူ၏အမည်ကိုခံယူခဲ့သည်။ စက်ရုံများနှင့်လှည်းများအတွက်အစိုးရအမှာစာအားလုံး၏လေးပုံတစ်ပုံနီးပါးကိုစုသိမ်းခဲ့သည်။
Putilov သည်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့်အရင်းအမြစ်များပြည့်နှက်နေသူဖြစ်ပြီးလက်ဝတ်ရတနာများကိုအလွန်နှစ်သက်မြတ်နိုးသည် (သူသည်Fabergé၏ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်သောဖောက်သည်များအနက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်) ကိုစိတ်ကူးကြည့်ရန်လွယ်ကူသည်။ တော်လှန်ရေးနှင့်အတူလီနင်သည်ပါတီလိုဗေး၏ကြွယ်ဝမှုကိုသိမ်းယူရန်အမိန့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးရုရှားကိုပဲရစ်သို့ထွက်ပြေးစေခဲ့သည်။
သို့သော် Putilov သည်သူ၏ရတနာအချို့ကိုသူနှင့်အတူမှောင်ခိုတင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်၊ ထိုအထဲတွင်ဤကျော်ကြားလှသောပုလဲလက်ထပ်ပွဲသည်မိသားစုမှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။
ပြာသော Christie ၏ခမ်းနားသောရတနာများရောင်းချခြင်း၏ဤဆောင်း ဦး ရာသီတွင်အဓိကအရောင်သည်သေချာသည်။
ရောင်းချမည့်နီလာနီလာများရွေးချယ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းပြီးအရောင်၊ ဖြတ်၊ အရွယ်အစားနှင့်မူလအစများ၏အနက်ရောင်အတွက်ကျောက်မျက်ရတနာအားလုံးသည်ထူးခြားသည်။ အဲဒီထဲမှာ -
ပြင်သစ်ပလက်တီနမ်စစ်ဆေးမှုအမှတ်အသားနှင့်အတူစတုဂံဖြတ်စိန်ပခုံးများ၊ လက်စွပ်အရွယ် ၄ လက်မအရွယ်အစားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၄.၆၅ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသောရှစ်လုံးတွဲအဆင့်ရှိနီလာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
အလေးချိန် ၈.၅၂ နှင့် ၇.၃၂ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောစတုရန်းကီလိုမီတာရှိသောဖြတ်တောက်ထားသောနီလာတစ်ခုစီသည်စိန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနှစ်ဆလိုင်းဆိုင်းထိန်းစနစ်နှင့်ကျော်တက်သော ၄.၅ စင်တီမီတာအထိပလက်တီနမ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
VAN CLEEF နှင့် ARPELS များမှထူးခြားသောANDရာမစပိန်နှင့်ဒီးမွန်လက်ကောက်၊
crossover ဒီဇိုင်း၏အလေးချိန်သည် ၆.၅၆၊ ၅.၇၃ နှင့် ၅.၇၂ ကာရက်တို့ဖြင့်အလေးချိန်ရှိသည့်ကူရှူပုံနှင့်ဘဲဥပုံဖြတ်နီလာသုံးမျိုးဖြင့်ရှေ့ပိုင်းတွင်ပလက်တီနမ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
Van Cleef & Arpels လက်မှတ်ရေးထိုးသည်
ပတ္တမြား အညီအမျှထိပ်တန်းဖြစ်ကြသည်, ငါ့အကြိုက်ဆုံးဒီဖြစ်ခြင်း ခြွင်းချက်ပတ္တမြားနှင့်စိန်လက်စွပ်၇,၈၈ ကာရက်ရှိမြန်မာဘဲဥပုံဖြတ်“ ခိုသွေး” ပတ္တမြားပါရှိသည်။
၇.၀၈ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောဘဲဥပုံဖြတ်တောက်ထားသောပတ္တမြား၊ လက်စွပ်အရွယ် ၆ လက်မအရွယ်ရွှေစွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစိန်ပခုံးများအကြား၊
အစီရင်ခံစာအမှတ်ဖြင့်လိုက်ပါသွား SSEF Swiss Gemmological Institute မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ၈၇၄၆၃ ရက်တွင်ပတ္တမြား၏မူလအစသည်အပူချိန်ကိုဖော်ပြခြင်းမရှိသောမြန်မာနိုင်ငံ (မြန်မာ) ဖြစ်ပြီး၊ အရောင်အား“ ခိုသွေးနီနီ”၊ နောက်ဆက်တွဲစာနှင့်ပရီမီယံဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်။ စာအုပ်။
သတင်းပို့ပါ။ Gübelin GemLab မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ ၃ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ၁၆၀၃၇၁၁၀၀ တွင်ပတ္တမြား၏မူလအစသည်အပူချိန်ကိုဖော်ပြခြင်းမရှိသောမြန်မာနိုင်ငံ (မြန်မာ) ဖြစ်ပြီးအရောင်အား 'ခိုသွေးနီနီ'၊ နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုနှင့်သတင်းအချက်အလက်စာရွက်နှစ်ခု ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ မိုးကုတ်၊ မြန်မာနှင့်မပူသည့်ပတ္တမြားမှပတ္တမြား။
ဤရောင်းချမှုအားလုံးသည်သူတို့၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုရထိုက်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ထူးကဲကောင်းမွန်ပြီးကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်အထင်ကြီးစေသည်။ သို့သော်ဤအကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှစ်ခုနှင့်အတူအနီးကပ်လေ့လာကြပါစို့။ Sierra Leone VI ၏ကြယ်နှင့် Countess Mona Bismark ၏ Cartier စိန်လက်ကောက်.
Sierra Leone VI ၏ကြယ် Sierra Leone ၏စတား၊ ရိုးရိုးစိန်ပွင့် ၉၆၈.၉ ကာရက် (Valentine's Day) တွင်ရရှိသောစိန်ပွင့် ၁၇ ခုမှ ၆ ခုမြောက် (အနက် ၁၃ ခုသည်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောစုစုပေါင်း ၂၃၈,၄ ကာရက်) ရှိသည်။ De Beers သည်ရောင်းဝယ်မှုကိုကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး၊ ကြမ်းတမ်းသောအရာများသည်လေ့လာမှုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဂရုစိုက်သော Harry Winston ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာသည်။
Harry WINSTON BY DIAMOND Ring, ၂၁.၆၉ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသောသစ်တော်သီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစိန်နှင့်အတူပလက်တီနမ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောလက်စွပ်အရွယ် ၅ လက်မအရွယ်ရှိစိန်ပွင့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစိန်ပွင့်များရှိသည်။
နောက်ဆုံးအန not တရာယ်အနည်းဆုံးကတော့ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရတဲ့အဖိုးတန်ကျောက်မျက်တွေထဲကတစ်ခု။ Cartier ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော Countess Mona Bismark ၏စိန်လက်ကောက်.
Countess Mona Bismark ။
Getty Images မှတစ်ဆင့် George Hoyningen-Huene / Condé Nast ၏ဓာတ်ပုံ။
Mona Bismark အမေရိကန်စင်တာဝက်ဘ်ဆိုက်မှ -
“ ၁၈၉၇-၁၉၈၃ ဒဏ္legာရီဆန်သော Mona Bismarck (née Strader) သည်ထင်ရှားကျော်ကြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည် ဇိမ်ကျကျနေထိုင်ခြင်း၊ စည်းဝေးကြီးကိုငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ကံကြမ္မာကိုမျှဝေခြင်းတို့ဖြစ်သည် အနုပညာ၊ ဖက်ရှင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ မှ 1926 ခုနှစ်တွင်သူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက် Harrison Williams သည်အမေရိကရှိအချမ်းသာဆုံးလူများအနက် Mona ဖြစ်သည် အလျင်အမြန်အချမ်းသာဆုံးနှင့်လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည် နယူးယောက်မြို့တွင်“ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်အမျိုးသမီး” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည် ဖက်ရှင်၏ခေတ်ပြိုင်ခုံသမာဓိ။
ဝီလျံ၏ကြီးမားသောကြွယ်ဝမှုနှင့်မြင့်မားသောလူမှုရေးအနေအထားကြောင့် Mona အလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာခဲ့သည် လူနေမှုဘဝပုံစံနှင့်စုံတွဲသည်နယူးယောက်ရှိလူနေအိမ်များအကြားအချိန်ကိုခွဲဝေယူခဲ့သည်။ Palm Beach, Paris နှင့် Capri ။ Harrison Williams သေဆုံးပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ၁၉၅၃ တွင် Mona သည်သူမ၏သက်တမ်းကြာသူငယ်ချင်း Count Edward von Bismarck နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်အဓိပတိအော့တိုဗွန်ဘစ်မတ်ခ်၏မြေးဖြစ်သူ။ ”
Cartier တွင်အဆင့်မြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြဲရှိပြီးအမြဲတမ်း Mona လည်းပါဝင်သည်။ Maison နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သူမသည်သူမ၏ရတနာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲ၊ ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
၁၉ ရာစုဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ Cartier ကတပ်ဆင်ထားသောဤခမ်းနားထည်ဝါသည့်စိန်လက်ကောက်သည် Countess ၏ခေတ်ဆန်သောအရသာနှင့်ကြော့ရှင်းမှုကိုပြသသည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၇.၁၃ ကာရက်ရှိအလေးချိန် ၇.၁၃ ကာရက်ရှိသည့်စိန်ကိုအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိစိန်ဘောင်အတွင်းတွင်ပြင်သစ်ပလက်တီနမ်နှင့်ရွှေတို့အတွက်ပြင်သစ်အက္ခရာအမှတ်အသားများဖြင့် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ၁၅.၅ စင်တီမီတာ၊
Monture Cartier ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
Tags:လလေံပှဲ • ခရစ်စမတ် • ခမ်းနားရတနာ • သက်သေပြ
မှတ်ချက်0ခုChristie ၏ခမ်းနားသောကျောက်မျက်ရတနာများဂျီနီဗာ - လေလံအိမ်၏ ၂၅၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အတွက်ကမ္ဘာ့ရှေ့ပြေးနှင့်အတူ“ ခမ်းနားသော” လေလံပွဲ"